Home CLASSIC FOOTBALLER Michael Owen Sheeko caruureed sheeko xambaarsan Xogta Warka Xogta
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhammaystiran ee bidixda bidixda oo si fiican loo yaqaan 'Nickname'; 'Wonder Man'. Our Michael Owen Storyhood plus iyo Xaqiiqooyinka Qaadista Joogtada ah ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo munaasabado la taaban karo ah laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqeyntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor caan ka ah, nolosha qoyska, nolosha xiriirka iyo wixii kale ee run ah oo aan la ogeyn oo ku saabsan isaga.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay nolosha Legendary Life, laakiin qaar ka mid ah waxay tixgeliyaan Michael Owen's Biography oo ah mid xiiso leh. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, aynu bilaabi.
Michael Owen Ilmaha Hore Sheeko Xogta Warka Xadida -Nolosha Hore
Michael James Owen wuxuu ku dhashay maalintii 14th December December 1979 ee Chester, United Kingdom.
Sagittarius oo ku dhashay Owen waa ilmo afraad ee waalidkiis. Waxa uu ku dhashay Jeanette Owen (hooyo) iyo Terry Owen (aabbe). Wuxuu ku noolaa dhammaanba caruurnimada caruurnimada ee nolosha ee Hawarden, Wales.
Owen waxaa lagu soo bandhigay kubadda cagta markii uu jiray da'da toddobo sano oo uu dhalay aabihiis oo u arkayay inuu yahay cayaaraha ugu fiican ee qoyskiisa. Taageerada dhalinyarada Everton, Owen wuxuu kaqeyb qaatay Dugsiga Hoose ee Drew Primary ee haweenka, Flintshire, waqooyiga Wales. Ilaa da'da toban, qaar ka mid ah indha-indheysayaasha qaranka ayaa kormeeray horumarkiisa.
Michael Owen (oo ku wareegsan madow)
Owen wuxuu ahaa ciyaaryahankii caanka ahaa ee loogu talagalay kooxda Dugsiga Hoose ee Xesida ee Deeside Area.
Tani waxay aheyd markii uu jabiyay rikoorkii Ian Rush ee 20 ee sanadihii la soo dhaafay isaga oo dhaliyay hal gool oo rikoor ah oo 97 ah xilli ciyaareed hal mar, horumarinta Rush ee rikoorkiisa 25. Waxaa la guddoonsiiyey guulihii caruurnimada.
Marka da'da 12, markii Owen uu bilaabay inuu dhigto dugsiga sare. Tani waxay ahayd waqtigii uu uqalmay inuu saxeexo qandaraaska qandaraaska dugsiga ee kooxda. Waqtigaan, kooxda kubada cagta ayaa u dhaqaaqay. Kooxdii ugu horeysay ee uu u arko inuu u ciyaaro Deeside waa Liverpool.
Xaqiiqdii, waxay ahayd Steve Heighway, madaxa horumarinta dhalinyarada ee Liverpool oo u qoray Owen shaqsi ahaan. Maamulkan kooxdu marnaba uma soo dhawaato ilmo leh jacayl badan.
Terry Owen wuxuu yiri: "[Heighway] ayaa noo qoray warqad afduub ah, waxaana uu ahaa jacaylkii koowaad ee Michael. Warqada cajiibka ah ee Liverpool ayaa muujisay sida ay u jecelyihiin Owen maalin ka hor. "
Si kastaba ha ahaatee, kahor Owen waxa uu siiyey saxiixiisa, waxa uu ku khasbanaaday inuu dhamaysto imtixaankiisa GCSE kaas oo sidoo kale ka soo baxay heerkiisa fasalka. In kasta oo uu guulo waxbarasho, Owen ayaa sheegay in mustaqbalkiisa uu ahaa xirfad ciyaareed kubbada cagta ah oo Liverpool ah.
Michael Owen Ilmaha Hore Sheeko Xogta Warka Xadida -Nolosha Xiriirka
Owen ayaa la kulmay Louise Bonsall oo ka tirsan Dugsiga Hoose ee Primary School, Hawarden, Clwyd, Waqooyiga Wales. Tani waxay ahayd sanadka 1984 markii Owen uu ahaa 5 sano jir. Labaduba waxay noqdeen saaxiibo waxayna ku soo koray si ay u noqdaan kuwo da'yar ah iyo ka dibna, dadka waaweyn ee jecel.
Louise Bonsall waxaa badanaa loo yaqaan 'WAG' oo jeclaan lahaa faras si boorsada gacanta ah. Waxay u tahay fardaha farsamaysan. Markii Michael uu ahaa ciyaaryahan da 'yar oo qurux badan, wuxuu soo jiitay indhaha xiddigaha Premiership da'diisu ka yartahay toban sano, Louise wuxuu marwalba ahaa mid farabadan.
Inkastoo uu guursanayo mid ka mid ah ciyaartoyda caanka ah ee ugu caansan dalka sanado badan kahor, Louise Owen maaha WAG. Ma arki doontid inay ka dhacdo meelo ka mid ah goobaha lagu caweeyo, mana u maleyneyso in qaliinka dalxiiska iyo qalliinka qurxinta loo yaqaano tartan tartan ah.
Qodobkeedana waa qoyskeeda marka hore iyo fardaheeda labaad. Iyaga iyo ninkeedu waxay si gaar ah u ilaaliyaan qarsoodiimadooda - xaqiiqda Louise weligeed horay uguma siin wareysi.
Waxay ku hawlanayeen 14 Febraayo 2004, waxayna guursadeen 24 June 2005, at Carden Park Hotel ee Chester, Cheshire. Lammaane ayaa markii hore qorshaynayey in ay is guursadaan gurigooda, hase yeeshee qorshooyinka bedelay markii lagu wargeliyay in haddii shatiga la siiyay munaasabada guurka, goobta waa in loo diyaariyaa aroosyada kale muddo saddex sano ah.
Kadib waxay doorbidaan inay guuraan xafiis diwaan gashan dharka aan rasmiga aheyn oo ay ku soo dhaweeyeen maalin dambe oo ay ku nool yihiin gurigooda. Hoos waxaa ku qoran sawirka arooska.
Michael Owen sawirka arooska
Lamaanahan ayaa soo iibsaday Lower Soughton Manor ee Flintshire, waqooyiga Wales, halkaas oo uu ku hayo baabuurtiisa. Louise Bonsall ayaa jecel fardo.
Gabadhooda, Gemma Rose, waxay ku dhalatay 1 May 2003. Sida hore loo arkay, Gemma waxaa lagu sawiray sawiradooda arooska. Owen wuxuu cutub dhan oo dhan u soocay gabadhiisa Gemma ee buugiisa, "Michael Owen: Ka Baabi Diiwaangashan, My Autobiography."
On 6 Febraayo 2006, waxay lahaan jireen wiil magac leh James Michael. Ilmahooda saddexaad, gabar, Emily May, wuxuu ku dhashay 29 October 2007. Cunugoodii afaraad Jessica waxay ku dhalatay 26 Febraayo 2010. Hoos waxaa ku qoran sawirka Owen iyo qoyskiisa cajiibka ah.
Michael Owen's Photo Photo
Michael Owen Ilmaha Hore Sheeko Xogta Warka Xadida -Nolosha Qoyska
Michael Owen waxa uu ka soo jeedaa qoys dhexe oo faraxsan heerka maalgelinta kubada cagta. Hoos waxaa ku qoran sawirka 1998 ee Owen oo gurigiisa la jooga qoyskiisa (aabaha, walaashii yar iyo walaalkiis Andrew) oo ku nool Waqooyiga Wales.
Guud ahaan, wuxuu leeyahay laba walaalo ah. Walaalihiisu waa Andrew Owen, Terry Junior, Karen Owen iyo Lesley Partridge. Owen ayaa mar walba loo arkaa inuu yahay wiilka ugu jecel aabihiis oo ahaa ninkii hore ee xirfadlayaasha ahaa, waxaana uu u ciyaaray kooxo sida Chester City iyo Everton (oo ah goolhaye udhashay Liverpool wiilkiisa).
Young Michael iyo aabihiis
Hoos waxaa ku qoran sawirka Jeanette Owen kaas oo ah hooyada sharafta leh ee Michael Owen.
Jeanette Owen (bidix)
Owen mar mar ayuu iibsaday wadada oo dhan qoyskiisa dheer ee Ewloe, kaas oo ku yaal meel u dhow halka uu ku noolaa.
Intaa waxaa dheer, In 2004, walaashii Owen ee Karen ayaa waxaa lagu dilay laba dhalinyaro, kuwaas oo isku dayay in ay afduubaan. Markii ay u sheegtay in ay uur leedahay, way carareen. Ugu dambeyntii, Owen waa walaalka walaalka ah ee kubada cagta ciyaaraha ka fariistay Richie Partridge.
Michael Owen Ilmaha Hore Sheeko Xogta Warka Xadida -Tababbarka Tababaraha Madrid
Ka dib markii Owen uu UK ugu soo laabtay Real Madrid inuu u ciyaaro Newcastle, waxa uu u safray meel u dhow garoonka diyaaradaha ee ku yaala magaalada Baall si uu u duulo, isagoo helaya helicopter, inuu tababar la qaato kooxdiisa. Tani waxay muujisay sida uu hodan u ahaa.
Michael Owen's helikopter ayaa ku soo degay garoonka tababarka
Diyaarad Helipad ah ayaa lagu rakibay dhismaha Owen ee gurigiisa iyo kooxdiisaba si uu u hirgeliyo helikabtadiisii ​​fiicnayd ee uu labadaba la socdo oo sidoo kale loo adeegsaday inuu tababaro noqdo pilot.
Michael Owen, oo wata diyaarad Helicopter ah
Owen ayaa ugu danbeyntii laga mamnuucay tababarka inuu noqdo tijaabo tababaraha kubada cagta ee Newcastle sababo badan oo ah caymiska xad-dhaafka ah.
Michael Owen Ilmaha Hore Sheeko Xogta Warka Xadida -Personality
Michael Owen waa mid ka mid ah sifooyinka soo socda ee shakhsiyadiisa wanaagsan.
Awoodaha: Shaki la'aan, wuxuu yahay mid qurux badan, deeqsinimo leh, qurux badan, oo leh dareen weyn.
Tabar-darrada: Wuxuu ballanqaadi karaa wax ka badan kii soo gudbin kara, oo aan dib u dhicin, waxna ku dhihi doono wax kasta oo aan midab-lahayn.
Sagittarius wuu jecel yahay: Owen wuxuu jecel yahay xorriyadda, safarka, falsafadda iyo inuu dibadda joogo.
Sagittarius jaceylka: Owen wuxuu necbaa dadka dabacsan, isagoo xannibaya.
Iskusoo wada duuboo, wuxuu awood u leeyahay inuu beddelo fekerkiisa ficil dhab ah oo uu samayn doono wax kasta oo uu ku gaari karo himiladiisa.
Michael Owen Ilmaha Hore Sheeko Xogta Warka Xadida -Dhaqdhaqaaqa iyo Horse Man
Bishii Abriil 2013, Owen, oo ay la socdaan darawalkii hore ee Formula One Mark Webber, ayaa iibsaday saamiyo tiro yar oo ka tirsan warbaahinta bulshada ee Sportlobster. Owen wuxuu leeyahay lahaansho dhowr ah. Jacaylka uu u leeyahay gawaarida isboortiga ayaa mar la muujiyey markii isaga iyo Wayne Rooney wuxuu ku riyaaqay kulan dib u wadid sannado badan.
Owen wuxuu sidoo kale ku raaxeeyaa tartanka fardaha kaas oo dhaliyey shakhsiyadiisa khamaarka. Waxa uu leeyahay jimicsi badan, oo uu tababaro Tom Dascombe. Wuxuu farasaaray faras Brown Panther oo ku guuleystay tartankii weynaa ee Royal Ascot ee 2011.
Michael Owen Ilmaha Hore Sheeko Xogta Warka Xadida -Shaqaalaha Telefishinka
Owen wuxuu sidoo kale ku soo bandhigay bandhigga riwaayadaha caruurta Hero si Zero. Barnaamijka, Owen wuxuu ka soo bixi doonaa farriin buuxda oo ka mid ah qolkiisa Charlie Brice's qolka si uu kuula taliyo waqtiyada dhibaatada.
Hubinta FACT Waad ku mahadsantihiin akhrinta Michael Owen Story Story iyo waxyaabo kale oo aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku habboonayn qodobkan, fadlan ku qor faalladaada ama nala soo xiriir!.
Liverpool Taariikhda Kubada Cagta
David Beckham Storyhood Story Plus Xogta Warka Xadidan